Hetauda Khabar - प्रदेश ३ सरकारको योजना- 'घर-घरमा जनताको उपचार देखि बाल बिवाहको अन्त्य' तर चुनौती कति ?
प्रदेश ३ सरकारको योजना- 'घर-घरमा जनताको उपचार देखि बाल बिवाहको अन्त्य' तर चुनौती कति ?
तीन नंम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र युवाको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण काम गर्दैछ ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा नयाँ तरिकाका साथ काम गर्ने योजना बनाएको छ । तीन नंम्बर प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आफ्नो मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था हेर्नका लागि पास्वचित्र तयार पारेर सार्बजनिक पनि गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा हरेक नागरिकका घरघरमा गएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने देखि बालबिवहाको अन्त्य, सडक मानव मुक्त प्रदेश लागएतका कुरालाई बिशेष चासो दिइएको छ ।
त्यस्तै शिक्षाबाट कोही पनि बालबालिका बन्चित नहुन् भन्ने उदेस्यले काम थालिएको सामाजिक विकास मन्त्री युबराज दुलालले बताउनुभएको छ । तीन नंम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा ११ वटा जिल्लामा आवासीय रुपमा संचालित बालगृहहरुमा मात्र ११ हाजर ८ सय ८२ जना बालबालिकाहरु बस्ने गरेका छन् । यस प्रदेशका बालगृहहरु पुर्ण रुपमा बालगृहको मापदण्डमा नरहेका धेरैछन् । ११ वटा जिल्लामा ४ सय १५ वटा बालगृहमा त धर्मको समेत प्रचार गरिएको पाइएको मन्त्री दुलाल बताउनुहुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले तीन नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युबराज दुलाल संग कुराकानी गरेका छौं ।